သုက်လွှတ်ရင် သုက်ရည်က သွေးရောင်ဖြစ်နေတယ် . . . – Healthy Life Journal
သုက်လွှတ်ရင် သုက်ရည်က သွေးရောင်ဖြစ်နေတယ် . . .
မေး. အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သုက်လွှတ်တဲ့အခါသွေးပါတာ တစ်နည်းအားဖြင့် သုက်ရည်ဟာ သွေးရောင်မျိုးတွေဖြစ်နေတာ စိုးရိမ်ရပါသလားခင်ဗျာ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ. အမျိုးသားတွေမှာ သုက်ရည်အရောင်ဟာ နို့ရည်လို ခပ်ပျစ်ပျစ်ချွဲချွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရောင် အနီရောင်ပါနေတာက သွေးပါနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာမို့ အသေးစိတ် စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှာ ပြသဖို့လိုပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်နေ့တစ်နာရီနှုန်းပြောသည့် အမျိုးသားများ သုက်ပိုးအရည်အသွေး နှစ်ဆကျဆင်းနိုင်